Arsneal oo u gacan haatinaysa K.Benzema – SBC
Arsneal oo u gacan haatinaysa K.Benzema
Tababaraha kooxda Arsenal Arsene Wenger ayaa xaqiijiyey in uu isha ku hayo isla markanaa uu qorsheynayo in xagaaga uu keeno garoonka Emirates ee waqooyiga magaalada London laacibka xulka qaranka Faransiiska & kooxda Real Madrid Karem Benzema, taasi oo qayb ka ah dadaal uu ku doonayo in kooxda dib ugu habeyn uu ku sameeyo.
“Waa laacib marka la eego qaabka dhaqdhaqaaqiisa, wuxuu awood u leeyahay in uu la shaqeeyo ciyaartoyda kale, waana nin sameyn kara is badala, si shakhsi ayuuna u dhaqaaqi karaa” ayuu yiri Wenger oo ka sheekaynayey qaab ciyaareedka Benzema.
“Marka laga hadlayo aragtieyda waa mid ka mid ah laacibiinta aduunka, wuxuuna iga joogaa meel aad u sareysa” ayuu sii raaciyey Arsene Wenger. Benzema wuxuu u saftey kooxda Real Madird 48 kulan wuxuuna u dhaliyey 26 gool xili ciyaareedkan, isagoo inta badan kulamada la safay aanu lagu bilaabin balse badal ku soo galay ciyaaraha, iyadoo la sheegay in xiriirka uu la leeyahay tababare Jose Mourinho uu ahaa mid aan diiraneyn oo aad u qabow.
Xidigan oo kooxda Lyon ee Faransiiska ay uga iibisay Bernebeu 50 milyan oo doolar, ayaa la sheegayaa in aanu aad ugu jacsenyn sii joogitaanka Real maadama aanu inta badan helin in la safo ama lagu bilaabo kulamada kooxda.
Hadii ay dhacdo in Benzema uu yimaado garoonka Arsenal waxay ka dhigan tahay inay sii kordhayaan ciyaartoyda Faransiiska ee u ciyaara, iyadoo macalinka Arsenal ee Faransiiska u dhashay lagu xanto in uu Emirates ku soo saaro laacibiinta u dhalatey Faransiiska, waxaana haatan ka mid ah kooxda Arenal ilaa iyo 7 ciyaartoy oo u dhashay Faransiiska.